Indlu ekuhlala kuyo eLubowa Seguku! Ifumaneka kwindawo ezolileyo eLubowa / Seguku, zii-5kms nje ukusuka kumbindi weSixeko saseKampala kunye neemitha ezingama-500 ukusuka kwindlela enkulu, le ndlu ibanzi inamagumbi okulala ama-5, ikhitshi, kunye nesihlomelo. Inetanki lamanzi lokuvuna imvula. Ihleli kwidesimali ezingama-23, indlu iphangalele, inebhalkhoni enkulu, ikhompawundi enkulu kunye negadi yemifuno enkulu. Ehleli phezu kwenduli, ipropathi inembonakalo entle. Le propati ifaneleke kakhulu njengezakhiwo zeofisi kwi-NGO, indlu yeendaba, okanye inkampani yabucala. Irente yanyanga zonke yi-3mUgx.